सुर्तीजन्य पदार्थको राजस्व असुली न्यून - Naya Patrika
भूकम्पपीडितको जनप्रतिनिधिसँग प्रश्नः कहिलेसम्म राहतको आसमा बस्ने ?
राष्ट्रकवि घिमिरलेलाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने
प्रदेश ४ को वर्षे अधिवेशन १६ जेठमा
देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने सबै किसिमका सिन्डिकेट तोडिन्छः थापा
विमानस्थलमा सन्दीपलार्इ दर्शककाे सम्मान (फोटो फिचर)
ओखलढुंगामा ७ सय २ दम्पतीको सगोलनामा कायम
एकता मजबुत बनाउन जनवर्गीय संगठनको भूमिका महत्वपूर्णः गौतम
३३ किलाे सुन तस्कर : पक्राउ परेका मध्ये २८ जनालार्इ पुर्पक्षका लागि जेल चलान, दुर्इ जना तारेखमा रिहा
स्थानीय तहमा कानुन नबन्दा समस्या
७० प्रतिशत ट्यांकरमा आधुनिक लकिङ जडान
सुर्तीजन्य पदार्थको राजस्व असुली न्यून
जितेन्द्र खड्गा/नयाँ पत्रिका सप्तरी, १ फागुन | फागुन ०१, २०७४
६ महिनामा लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली
सप्तरीमा सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार दैनिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हुन्छ । यहाँ खपत हुने अधिकांश सुर्तीजन्य पदार्थ भारतीय उत्पादन हो । भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थले नेपाली बजार पाए पनि त्यसबापत राजस्व संकलन भने न्यून प्रायः छ ।
तिलाठी–कोइलाडीस्थित राजविराज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा भन्सार कार्यालयले सुर्तीजन्य पदार्थबाट एक पैसा पनि राजस्व असुली गरेको छैन । तर, सप्तरीमा मात्रै एक महिनामा भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार एक करोड रुपैयाँबराबरको हुने गरेको छ ।
तस्करले विनाभन्सार भारतबाट महिनामा एक करोड रुपैयाँबराबरको सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल भित्राउने गरेका छन् । राजविराज भन्सारका निमित्त प्रमुख रामराजप्रसाद चौरसियाले सप्तरीबाट मात्रै नभई अरू जिल्लाको नाकाबाट पनि सुर्तीजन्य पदार्थ आउने गरेको बताए । उनले सप्तरीका नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।
गत वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ बोकेको एउटा मिनि ट्रक जफत भएपछि त्यसबाट राजविराज भन्सार कार्यालयलाई ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा परिचालित प्रहरी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा सुर्तीजन्य पदार्थको तस्करी बढ्दा राजस्व संकलनमा राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ ।
राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल
चालू आर्थिक वर्षमा राजविराज भन्सार कार्यालयलाई लक्ष्यअनुरूपको राजस्व संकलन गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यको लगभग २७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुँदा राजस्वको लक्ष्य भेट्न भन्सार कार्यालयले नसक्ने अवस्था आएको हो । भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ८ करोड ६९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालू आवको पछिल्लो ६ महिनामा २ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली भएको निमित्त भन्सार प्रमुख चौरसियाले जानकारी दिए ।
गत आवमा राजविराज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुरूप नै ७ करोड २३ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको थियो । गत आबको लक्ष्य ७ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ थियो ।
तीनजना तस्कर पक्राउ
भन्सार छली मालसमान नेपाल भित्राउँदै गरेको अवस्थाबाट शुक्रबार तीनजना तस्कर पक्राउ परेका छन् । सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडीबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्सार कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ का ३० वर्षीय प्रमानन्द महत, २५ वर्षीय राजकुमार खत्वे र वडा नं. १ का ४२ वर्षीय किशोर झा रहेका छन् ।
दुईवटा अटो रिक्सामा करिब १० लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका समान भित्राउँदै गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको राजविराज भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख चौरसियाले बताए ।
यसैगरी, राजविराज नगरपालिका ११ का नरेश साहलाई पनि तस्करीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगएको छ । साहको साथबाट १५ हजारबराबरको अवैध सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद भएको हो ।
३३ किलाे सुन तस्करीका मुख्य याेजनाकार ‘गोरे’ लाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक
ज्वरोको जानकारी लिन जाजरकोट गएका मन्त्री र सचिवको बिल १८ लाख
सम्पादकीय : श्रममन्त्रीको आँटिलो कदम
डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी
यस्ताे छ सरकारको पाँचवर्षे महत्वाकांक्षी ‘रोडम्याप’
टुंगो लागे नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्य